बिचित्र संसार – On Khabar
Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार बिचित्र संसार समाचार
गाई काटेर मासु खाने ३ जना रंगेहात पक्राउ, कस्तो हुनेछ सजाय ?
अनखबर माघ १५, काठमाडौं राष्ट्रिय जनावरको रुपमा मानिएको गाई काटेर मासु खाने गरेका तीन जना रंगेहात पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ५४ वर्षीय कृष्णबहादुर गोले, १८ वर्षीय विजय न्यासुर र १८ वर्षीय सुवास टुप्पा रहेका छन् । मंगलबार मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको बकैया गाउँपालिका९१२ निगालेस्थित तामाङ बस्तीका बासिन्दाले मासु खानलाई गाई काटेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ […]
January 21, 2019 January 21, 2019 onkhabar	Comment(0)
कर्ण बिश्वक्रर्मा / अनखबर कालिकोट कालिकोटको पचालझरना गाँउपालिका वडा नं। ७ निवासी ४५ बर्षीया जयबहादुर ऐडी विगत चार बर्षदेखि अ‍ोडारमा बस्दै आएका छन् । जिविका चलाउन भारी बोक्नुको बिकल्प नहुँदा विगत १० बर्षदेखि निरन्तर भारी बोक्ने काम गर्दै आएका ऐडी सन्तानको भविश्यका लागि ओडारमा बसेको बताउँछन् । विगत चार बर्षदेखि जितेबजारको किनारमा रहेको चट्टान भित्रको […]
काठमाडौंबाट २३ बर्षकी गीता शर्मा भन्छिन सुहागरातको दिन सेक्स गर्दा यस्तो (भिडियो) !
November 27, 2018 onkhabar	Comment(0)
तिमीलाई कुमारी केटीसँग बिहे गर्नुछ भने कोक्रोमा पाइएला। कुमारीत्वको भ्रम र आडम्बरका कुरा युगौंदेखि चलिरहेका छन्। बिहेअघि शारीरिक सम्बन्ध नराखेकी अर्थात् अक्षत योनी भएकी महिलालाई कुमारी भन्ने गरिन्छ, सामान्यतया। तर, अक्षत योनीको अवधारणा त्यति सजिलो भने छैन किनभने साइक्लिङ र खेलकुदले पनि किशोरीको योनीमा भएको झिल्ली च्यातिनसक्छ। केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा एउटा डिभोर्सको घटना भएको थियो। […]
काठमाडौं । कतिपयले सुत्नुअघि लुगा परिवर्तन गर्न पनि जाँगर गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नग्न भएर सुत्ने कुरा कतिलाई नपच्न सक्छ । तर यो जाडो वा गर्मीको कुरा होइन । लुगा नलगाई सुत्दा हुने फाइदाका कुरा हुन् । तर हाम्रा सुताईको पोजिसन एवं प्रक्रियाले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले नग्न भएर सुत्नु पनि शारीरिक स्वास्थ्यका […]
४० वर्ष उमेर समूहका एक जोडीमाथि आइलागेको बज्रपात
November 26, 2018 onkhabar	Comment(0)
जमुना सिटौला । कार्यालयको खाजा खाने समय भएको थियो । एकैछिन मेडिकल महाशाखातिर पुगें । झन्डै ४० वर्ष उमेर समूहका एक जोडी सेवा लिन कुरेर बसेका रहेछन् । खाजा खाने समय भएकाले केही छिन बाहिर कुरेर बसेका बेला मैले उहाँहरूलाई केका लागि आउनुभएको भनेर सोध्दा भक्कानिँदै भनेपछि म भयो स्तब्ध भएँ । यो भन्दा ठूलो […]
काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा १९ वर्षीया युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक नेपालीलार्इ नेपाल फिर्ता पठाइने भएको छ । उबर ट्याक्सी ड्राइभरका रूपमा कार्यरत ३६ वर्षीया राजेन्द्र इङनमले सन् २०१७ को क्रिस्मस इभ मनाएर सर्फर्स प्याराडाइज क्लबबाट फर्केकी युवतीलार्इ घर छोड्ने क्रममा यौन प्रस्ताव राखेको बताइएको छ । युवतीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि इङनमले युवतीमाथि दुर्व्यवहार गरेका […]
मस्को । सामान्यज्ञान तथा हाजिरीजवाफमा प्रायः सोधिने प्रश्न हो– चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानव को हुन् ? वर्षौंदेखि एउटै जवाफ हुने गरेको छ– नील आर्मस्ट्रंग । सामान्यज्ञान तथा हाजिरी जवाफमा सोधिने यो प्रश्नको जवाफ परिवर्तन होला त ? रुसले थालेको अनुसन्धानप्रति चासो राख्दै धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिन थालेको छ । २० जुलाई १९५९ […]
नेपालमै भयो यस्तो अचम्म : श्रीमति साटासाट – आफ्नो श्रीमती भगाउनेकै श्रीमती भगाईदिए
November 25, 2018 onkhabar	Comment(0)
हेलो, तपाईं दीपक हो ? हो, किन ? म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट। किन मेरी श्रीमती लानुभा’को ? लगेँ, तँ सक्छस् भने मेरी पनि लगेर देखा । यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका मोरङ, उर्लाबारी-६, मंगलबारेका जितबहादुर दर्नाल तथा सोही गाविस वडा नम्बर-९ का दीपक नेपालीबीचको फोन वार्ता हो । वैदेशिक रोजगारीमा डेढ वर्षअघिदेखि कतारमा रहेका […]
७२ अर्ब कर नतिर्ने एनसेललाई अखिल (क्रान्तिकारी)को चेतावनी, कर नतिरे टावर ध्वस्त !